Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » IATA: Canshuurtu Maaha Jawaabta Joogtaynta Duulista
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Ku tiirsanaanta canshuuraha oo ah xalka lagu dhimayo qiiqa hawada ee soo jeedinta EU-da ee 'Fit for 55' waa mid aan wax-soo-saar lahayn si loo gaaro yoolka duulimaad waara.
Duulista hawada waxaa ka go'an in decarbonization sida warshadaha caalamiga ah.
Shidaalka Duulimaadka ee Joogtada ah kaas oo hoos u dhiga qiiqa ilaa 80% marka la barbar dhigo shidaalka diyaaradaha ee caadiga ah.
Aragtida dhow ee duulimaadku waa inay siiso gaadiid hawo oo raqiis ah dhammaan muwaadiniinta reer Yurub oo leh maraakiib ku shaqeeya SAF, oo ku shaqeynaya maaraynta taraafikada hawada oo hufan.
The Ururka Caalamiga ee Gaadiidka Cirka (IATA) ayaa ka digay in ku-tiirsanaanta canshuuraha oo ah xalka lagu dhimayo qiiqa hawada ee soo jeedinta EU-da ee 'Fit for 55' ay tahay mid aan wax-soo-saar u ahayn yoolka duulista waarta. Siyaasadda Midowga Yurub waxay u baahan tahay inay taageerto tallaabooyinka dhimista wax -ku -oolka ah ee wax -ku -oolka ah sida dhiirrigelinta Shidaalka Duulimaadka Joogtada ah (SAF) iyo casriyeynta maareynta taraafikada hawada.
“Duulimaadyada waxaa ka go’an in decarbonization ahaan loo noqdo warshad caalami ah. Uma baahnin qancinta, ama tallaabooyinka ciqaabta sida canshuuraha si loo dhiirrigeliyo isbeddelka. Dhab ahaantii, canshuuraha waxay lacag ka helaan warshadaha oo taageeri kara maalgelinta yaraynta qiiqa ee cusboonaysiinta maraakiibta iyo farsamooyinka nadiifka ah. Si loo yareeyo wasakhda hawada, waxaan u baahanahay dawladaha inay hirgeliyaan qaab -dhismeed siyaasadeed oo wax -ku -ool ah, oo isla markiiba, diiradda saaraya dhiirrigelinta wax -soo -saarka ee SAF iyo gaarsiinta Kalkalka Yurub ee Kaliya, ”ayuu yiri Willie Walsh, Agaasimaha Guud ee IATA.
Si loo gaaro decarbonization -ka duulista hawada waxay u baahan tahay tallaabooyin isku jira. Kuwaas waxaa ka mid ah:
Shidaalka Hawada ee Waara kuwaas oo hoos u dhigaya qiiqa ilaa 80% marka la barbardhigo shidaalka diyaaradaha ee caadiga ah. Sahayda oo aan ku filnayn iyo sicirrada sarreeya ayaa xaddiday in diyaaraduhu ay gaadhaan 120 milyan oo litir sannadka 2021 - waa qayb yar oo ka mid ah 350 bilyan oo litir oo ay diyaaraduhu isticmaali lahaayeen sannad 'caadi' ah.
Tallaabooyinka suuqa ku saleysan si loo maareeyo qiiqa ilaa xalalka farsamada si buuxda loo horumariyo. Warshaduhu waxay taageeraan Qorshaha Ka -dhimista Kaarboon -Carbon iyo Qorshaha Dhimista Duulista Caalamiga ah (CORSIA) oo ah cabbir caalami ah oo loogu talagalay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah. Waxay ka fogaanaysaa in la abuuro isku -dheelitir tallaabooyin qaran ama goboleed oo aan la isku dubbaridan sida Qorshaha Ganacsiga Qiiqa ee Midowga Yurub, oo wiiqi kara iskaashiga caalamiga ah. Qorshayaasha is -dul saaran waxay keeni karaan in isla qiiqa la bixiyo in ka badan hal mar. IATA waxay aad uga walaacsan tahay soo jeedinta Guddiga ee ah in Dowladaha Yurub aysan mar dambe CORSIA ka hirgelin doonin dhammaan duulimaadyada caalamiga ah.
Hal Sky Yurub (SES) si loo yareeyo qiiqa aan loo baahnayn ee ka yimaada maareynta taraafikada hawada ee jajaban (ATM) iyo wax -qabad la’aanta keentay. Casriyeynta ATM-ka Yurub iyada oo loo marayo hindisaha SES waxay yareyn doontaa qiiqa hawada Yurub inta u dhexeysa 6-10%, laakiin dowladaha qaranku waxay sii wadaan inay dib u dhigaan hirgelinta.
Farsamooyin cusub oo nadiif ah oo xagjir ah. In kasta oo aanay u badnayn in soo -kicinta korontada ama hydrogen -ku ay saamayn weyn ku yeelan karto qiiqa hawada ee ka dhex jira EU 'Fit for 55' wakhtiga 2030 -ka, horumarinta tiknoolijiyadaani waa mid socota oo u baahan in la taageero.
“Aragtida mustaqbalka dhow ee duulimaadku waa inay siiso gaadiid hawo oo raqiis ah dhammaan muwaadiniinta reer Yurub oo leh maraakiib ku shaqeeya SAF, oo ku shaqeynaya maaraynta taraafikada hawada oo hufan. Dhammaanteen waa inaan ka walwalsanahay in fikradda weyn ee Midowga Yurub ee ah in la baabi'iyo duulista hawada ay shidaalka diyaaradda ka dhigeyso mid qaali ah canshuur ahaan. Taasi ma na gaarsiin doonto halka aan u baahan nahay. Canshuurtu waxay burburin doontaa shaqooyinka. Dhiirrigelinta SAF waxay hagaajin doontaa madaxbannaanida tamarta waxayna abuuri doontaa shaqooyin waara. Waa in diiradda la saaraa dhiirrigelinta wax -soo -saarka SAF, iyo gaarsiinta Kalkalka Hal Yurub ah, ”ayuu yiri Walsh.